ओमकार टाइम्स रवि लामिछाने दोषी ठहरिए कस्तो सजाय हुन्छ? – OMKARTIMES
काठमाडौं : पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीले टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई बिहीबार साँझ पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र महानगरीय प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा काठमाडौंको टोलीले लामिछाने कार्यरत ‘न्यूज २४ टेलिभिजन’को कार्यालय परिसरबाटै रवि र उनका सहयोगी युवराज कँडेललाई पक्राउ गरेको हो।
यसअघि बिहीबार दिउँसो नै पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भिडियोमा नाम लिइएकी ओखलढुंगाकी अस्मिता कार्की ‘रुकु’लाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीको टोली रवि र युवराजलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत चितवनको पक्राउ पूर्जी लिएर टेलिभिजनको कार्यालय रहेको काठमाडौंको पानीपोखरी पुगेको थियो। दुवैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि आजै चिवतन लगिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि नाम लिइएका तीनैजनालाई पक्राउ गरिएकाले अब अनुसन्धानले तीव्रता पाउने बताएका छन्।
पुडासैनीको मोबाइल फोन र त्यसमा रहेका अडियो, भिडियोको ल्याब रिर्पोट बिहीबार चितवन पुगेपछि प्रहरीले तीनैजनालाई पक्राउ गरेको हो। एसपी मल्लका अनुसार तीनैजनामाथि पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको र त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति खडा गरेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ। उनले यस प्रकरणमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्ने बचनबद्धता पनि गरेका छन्।
मुलुकी फौजदारी संहिता १८५.२ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने र त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यो प्रकरणमा आत्महत्या गर्नुअघि पुडासैनीले रवि, युवराज र अस्मिताका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भनेकाले त्यो कुरा पुष्टि भएमा कम्तिमा ५ वर्ष जेल सजाय हुनेछ।
प्रहरीले तीनैजनालाई मुलुकी फौजदारी संहिता दफा १८५ अनुसार अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको हो। पुडासैनीसँग उठबस भएको भनिएकी अस्मिता (रुकु) कार्कीलाई प्रहरीले बिहीबार बिहानै पक्राउ गरेर चितवन लगिसकेको छ। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परिसकेपछि २४ घण्टाभित्र अदालतको म्याद लिएर न्यायिक हिरासतमा राखिसक्नुपर्छ। विद्यमान कानुनअनुसार प्रहरीले रविसहितलाई २५ दिनसम्मको न्यायिक हिरासतमा राखी मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्छ।
यता गम्भीर आरोप लागेपछि रविले यो घटनामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। आफूसँग काम गरेपछि शालिकराम माउन्टेन टेलिभिजनमा गएको भन्दै रविले सुरूमा उनको प्रशंसा गरेका थिए।
रविले शालिकलाई ‘छातीमा लात्ती खाएर पनि प्रश्न सोध्न सक्ने पत्रकार’ भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। तर, उनले पछिल्लो पटक यो प्रकरणमा कुरा फेरेका थिए। रविले यस प्रकरणमा कुनै कोणबाट पनि दोषी प्रमाणित भएमा सजायको भागिदार हुने दाबी गरेका थिए। बुधबार शालिकरामको भिडियो सार्वजनिक भएपछि रविले फेसबुक लाइभमा आउने भनेका थिए। तर उनी फेसबुक लाइभमा आएनन्। बिहीबार पनि रविले यस प्रकरणमा अस्मितालाई सीधा कुरा जनतासँगमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा यो पक्ररणको अनुसन्धानमा बाधा हुने भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
शालिकरामले भिडियोमा के भनेका थिए?
शालिकराम पुडासैनीको रुँदै बोलिरहेको करिब ८ मिनेटको भिडियो र अडियो टेपमा रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले पछिल्लो पटक धेरै यातना दिएको भनेका छन्। पटकपटक उनले रवि र युवराज अनि अस्मिताका कारण आत्महत्या गर्न गइरहेको भनेका छन्। उनले भिडियोमा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् बालुवा ठेकेदार, सिमेन्टलगायत ठूला कम्पनी र व्यापारिक घरानाबाट रविले सिधा कुरा जनतासँगको डर देखाएर करोडौं कमाउने गरेको पनि बताएका छन्। ‘रातदिन काम लगाएर मलाई कम मात्रै पैसा दिने। कराउँदा कराउँदा बल्लतल्ल १८ हजार तलब पुर्‍याए। थोत्रो मोटरसाइकलको मर्मतमै मासिक ४-५ हजार खर्च हुने, कोठाभाडा, यताउता सबै त्यसैले पुर्‍याउनुपर्ने।
प्यारी सम्झना, मैले कसरी सक्नु! रवि दाइ, मलाई मर्न बाध्य बनाएकोमा तपाईंहरूलाई पाप लाग्छ’, उनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘केही केही दिनदुःखीको उद्धार पनि गर्नुभयो, तर अरुको प्रगति देख्न सक्नुभएन। दुनियाँलाई थर्काउनुभयो, ढिलोचाँडो दुनियाँले तपाईंको असली रुप देख्नेछ। मसँग प्रमाण छ, आज नभए पनि भोलि तपाईंको पापको घडा भरिन्छ। तँ अब फसिस् भन्दै मलाई मर्न बाध्य पारेकोमा त्यो पापले तपाईंलाई पोल्नेछ।’ कुमरीको घर बेचेर रामकोटमा घर बनाउन श्रीमतीलाई सल्लाह दिँदै रुँदै दुई हात जोडेर उनले भनेका छन्, ‘सम्झना, तिमी भर्खर २२-२३ वर्षकी भयौ, अर्को बिहे गर, मलाई माफ गरिदेऊ।’
आफूलाई दुरुपयोग गर्न गरिएको योजनाबारे पनि पुडासैनी बोलेका छन्। ‘मैले न्युज २४ छोड्छु भन्दा रवि र दीपक भएर त्यसो नगर बरु डिपेन्डेण्ट भिसामा अष्ट्रेलिया पठाइदिन्छौं भन्दै रालुका गाविस ओखलढुंगाकी अस्मिता कार्कीको पछि लगाए’, उनले भनेका छन्, ‘त्यही केटीलाई मैले बीपी स्मृति हस्पिटल बसुन्धरामा जागिर लगाइदिएँ, पुतलीसडकको कन्सल्ट्यान्सीमा पनि बिहान–बिहान पुर्‍याइदिएँ। पछि उसले उल्टै खाते भन्दै मैलाई हेप्न थाली, म ऊबाट टाढिँदै गएँ। त्यही क्रममा मैले न्युज २४ टेलिभिजन छाडेँ। त्यसबापत मलाई उहाँहरूले त्यही केटीलाई बलात्कार गरेको भनेर फसाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यसकारण म अब यस संसारमा यस्तैगरी बाँचिरहन चाहन्‍नँ।’